“Manchester United uma qalmin inay garaacdo Leicester City” – Brendan Rodgers – Gool FM
“Manchester United uma qalmin inay garaacdo Leicester City” – Brendan Rodgers
(England) 15 Sebt 2019. Tababaraha kooxda Leicester City ee Brendan Rodgers ayaa sheegay in Manchester United aysan u qalmin guushii ay ku gaareen garoonka Old Trafford.
Kooxda Manchester United ayaa guul muhiim ah ay u baahneed ka gaartay naadiga Leicester City, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, kulankii Premier League ay shalay ku wada ciyaareen garoonka Old Trafford.
Tababare Brendan Rodgers oo muujiyay sida uu kaga xun yahay guuldarada ay kala kulmeen kooxda Manchester United ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan u maleynayaa inaan u qalanay in wax uun aan ka helno ciyaarta, uma qalmin inaan guuldareysano, marka loo fiiriyo wixii aan ku hor sameynay Manchester United inta ciyaarta ay socotay”.
“Bilaabashadeena ciyaarta ma aysan fiicneyn, laakiin waxaan helnay fursad aan horey ugu socon karnay, dhinaca kale Manchester United waxay ku guuleysatay in ciyaarta ay ku go’aamiso rigoore”.
“Qeybta nasashada kaddib si fiican ayaan u ciyaarnay, waxaan ku dhawaanay inaan gaarno shabaqa United-ka, laakiin taabashada dhameystirka ma aheyn mid kufilan mana aanan ku guuleysan inaan wax uun kala soo baxno ciyaarta”.
Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Premier League ee maanta ay Kooxda Arsenal booqanayso Watford
Hazard oo ka hadlay dareenkiisa kaddib kulankiisii ugu horreeyay ee kooxda Real Madrid